ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၏ စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ)
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၏ စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ)
Credit - 1myanmar YouTube Channel
It was happy for watching this video that can be tasted the practice of democracy but oppositely, so many sad for Latpadaung innocent villagers who are going to jail by the monarchical practice.
It would be the first in experience of state government that political debate among the international community.
Not perfect but try to content.
တွေ့တာ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဦးစိုးသိန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမကြီး အမကြီးနဲ့ လုပ်ပြနေတယ်၊ နိုင်ငံတကာ မှာ သူတို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားကြောင်း အတင်းပဲ လုပ်ပြနေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခုတုံးလုပ် အသုံးချချင်နေတယ်ဆိုတာ သေသေချာချာ ကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၁၉၈၂ နိုင်ငံသားဥပဒေကို international norms တွေနဲ့ အညီ ညှိယူရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ international norms တွေဆိုတာ ဘာတွေကို ပြောတာလည်းမသိဘူး။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု အတွက် ကမ္ဘာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံချိန်စံညွန်းတို့၊ ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ ဘောင်တို့ဆိုတာရှိပါသလား။ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ geopolitics တို့ economy တို့ အပေါ်မှာပဲ အဓိကထား ဆုံဖြတ်ရတာ မဟုတ်ဘူးလား။
နောက်တခုက Speakers တွေထဲမှာ အစိုးရဘက်က တစ်ယောက်ထဲ့မှ ကောင်းမှာ မို့လို့ ဦးစိုးသိန်းကို ထည့်ထားတာမို့ သူပေါက်တတ်ကရတွေ ပြောနေတာကိုနားလည်းပေးပြီးနားထောင်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညာအစွန်က အမျိုးသမီးကတော့ ကျောင်းထောင်ထားတယ်သာပြောတယ် ပေါက်တတ်ကရတွေချည်းပဲ။ debate ပြီးခါနီးမှာ အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ရယ်လိုက်သေးတယ်။ အောက်က ဦသန်းမြင့်ဦး အပါအဝင် Audience တွေပြောတာကမှ ကောင်းသေးတယ်။ Speaker ဆိုတာ Speaker အရည်အချင်းနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးရှိနိုင်မဲ့လူကို သေသေချာချာရွေးပြီးမှ ထားရတာ။ သူက ကချင် ကိစ္စမှာတုံးက ဗိုလ်ချုပ် ဂွမ်မော် တို့ ၂ ချက်လောက် လှည့်လိုက်တာ လည်ပြီး ပြန်လာခဲ့သူပေါ့။
ဘီဘီစီကတော့ အဲ့ဒီလိုပါပဲ။ အများကြီးမလွဲရင်တောင် နည်းနည်းလေးတော့လွဲလိုက်ရမှ။
ဦးစိုးသိန်းက သနားစရာ Joker ကြီးပါ။ ရီလည်း ရီရတယ်။ သူကိုမြင်တော့ Fiver Stars အဖွဲ့လူရွှင်တော် အောင်မော်ကို သတိယတယ်။